Thenga i-Delta 8 THC kunye neoyile ye-CBD | Umlawuli obomvu we-CBD 2021 amaxabiso aphezulu
Iphepha likaFacebook livula kwiwindow entshaIphepha le-Twitter livula kwiwindow entshaIkhasi le-Linkedin livula kwiwindow entshaIphepha le-Instagram livula kwiwindow entshaIphepha le-YouTube livula kwiwindow entsha
Ivenkile ye-Intanethi ye-CBD
Ivenkile yeDelta 8 Imveliso zeTHC
Ngaba iDelta 8 THC isemthethweni kwiLizwe lam?
I-Delta 8 ye-THC kunye neNkqubo yokuDibana kwe-CBD
Uyivula njani i-Dispensary engaphantsi kweedola ezingama-50
Ivenkile yeeMveliso ze-CBD
Iikhompyuter ze-CBD kunye neeGel ezithambileyo
Ukhathalelo lolusu lwe-CBD
Ioyile ye-CBD kunye neTinctures
I-CBD yezilwanyana zasekhaya
Iipenseli ze-VD ye-CBD
Zithini izibonelelo ze-CBD
Iimpendulo zoNyango ezijikeleze iWebhu malunga ne-Delta 8 THC kunye ne-CBD
Nguwuphi umahluko phakathi kweoyile ye-CBD kunye neoyile epheleleyo yeSpectrum
I-CBD kunye neswekile
I-CBD kunye nezeMpilo
CBD kunye namabala
I-CBD yokuphelisa iintlungu
Isebenza njani i-Red Emperor CBD kunye ne-Delta 8 THC?
Umanyano lwePhepha loKwamkela
Umlawuli obomvu we-CBD kunye ne-Delta 8 THC Njengoko i-Delta 8 THC kunye ne-CBD ikhula mihla le, unokufumana i-CBD kunye ne-Delta 8 THC kungekuphela kwitshokholethi yakho, iti okanye iilekese kodwa nakwiimveliso zakho zobuhle. Ngathi Qhagamshelana nathi
Thenga i-Delta 8 THC okanye i-CBD yeoyile ekwi-Intanethi ukusuka
Njengoko i-CBD kunye ne-Delta 8 ye-THC ikhula mihla le. Namhlanje ungayifumana i-CBD kunye ne-hemp hayi kwi
itshokholethi yakho, iti, okanye ilekese kodwa kwiimveliso zakho zobuhle ngokunjalo.
Ibali lesityalo se-hemp laqala malunga ne-2700 BC xa uShen-Nung ekwabizwa ngokuba yi UMlawuli oBomvu qala ukujonga kwizityalo ukunyanga abantu bakhe. Ngokwentsomi ebhaliweyo, uMlawuli oBomvu wayeza kuzama iityhefu kunye neziyobisi kubo. Emva koko waqulunqa incwadi yezonyango ebizwa ngokuba Ipeni Ts'ao. Esi sikhokelo samandulo saseTshayina sonyango sidwelise amakhulu eziyobisi ezivela kwizilwanyana, kwimifuno nakwimithombo yezimbiwa. Okubandakanyiweyo kula machiza sisityalo se-cannabis, "ma"
Isityalo se-cannabis sisiyobisi esahlukileyo kuba sidibanisa iYang eyindoda, kunye necandelo labasetyhini i-Ya. U-Yin ubonise impembelelo kwindalo ngelixa i-yang imele amandla endalo asebenzayo. Xa i-yin ne-yang zilinganisiwe, umzimba uyahambelana kwaye usempilweni. Inkampani ye-Red Emperor CBD yaqala ngo-2011 njenge-Red Emperor Collective Dispensary kwaye ibisebenza ekusebenziseni iipropathi zokuphilisa izityalo ze-cannabis ukusukela oko.
Skena ibhokisi kumfanekiso ongentla ngekhamera yakho ye-smartphone ukubona iziphumo zovavanyo lomntu wesithathu Delta ngobuninzi 8 THC & Iimveliso ze-CBD. Sinikezela ngale nkonzo ukuze uqiniseke ngomgangatho kunye nemixholo yomgangatho wethu ophezulu I-CBD kunye ne-Delta 8 yeeTHC Iimveliso.
Iimveliso ze-CBD (34)
Iipilisi ze-CBD (2)
Iitoliki ze-CBD (7)
Ukhathalelo lolusu lwe-CBD (9)
Ioyile ye-CBD kunye neTinctures (11)
IZIXHOBO ZE-CBD (3)
I-CBD yezilwanyana ezifuywayo (4)
Intyatyambo ye-CBD (1)
IDelta 8 THC (14)
Iimveliso zekhasi lasekhaya (12)
Zine iindidi zeemveliso zeoyile ze-CBD
Xa uthenga ioyile ye-CBD
Kuthetha ukuba iqulethe umkhondo wazo zonke ii-cannabinoids, i-terpenes, kunye neoyile ngokwendalo kwizityalo. Iqulethe isixa esincinci se-THC, esingaphantsi kwe-0.3%. Indibaniselwano yazo zonke ezi zinto ziphilayo ngokuhlangeneyo ivelisa oko kubizwa ngokuba yi "the entourage effect", nto leyo eyandisa iimpembelelo zeoyile ye-CBD ngaphandle kokukwenza ube phezulu.
Njenge-CBD epheleleyo, i-CBD ebanzi iqulethe i-cannabidiol kunye nezinye i-cannabinoids ezikhoyo kwisityalo, ngaphandle kwe-THC, esuswe ngokupheleleyo. "Impembelelo yangaphakathi" ikhona nakwiimveliso ze-CBD ezibanzi.
I-CDB ikhetha okanye i-THC yasimahla yeoyile ye-CBD:
I-CBD ikhetha i-CBD ngendlela yayo esulungekileyo. Zonke ezinye ii-cannabinoids kunye neekhemikhali ziyasuswa. Umxhasi ophambili we-CBD ukwahlula kukuba yifomathi ye-CBD eneyona ngxaki iphakamileyo ye-CBD, kwaye ilungele abantu abafuna ukuthatha isixa esikhulu se-CBD. Eyona nto iphambili kukungabikho ngokupheleleyo kwempembelelo yeqela. Ngeso sizathu, i-CBD yokuzahlula-ngaphandle isezona mveliso zithandwayo ze-CBD.
Kutheni kufuneka usebenzise iiMveliso zeoyile ze-CBD?
Xa uthenga ioyile ye-CBD kwi-Intanethi, lolunye ukhetho olunomtsalane kunyango lweempawu ezinxulumene neemeko ezininzi zempilo. I-CBD sisiyobisi esidambisa iintlungu. Kukho inkqubo emzimbeni wethu ebizwa ngokuba yi-endocannabinoid system (ECS), enceda ukulawula ukusebenza komzimba njengokutya, ukulala kunye nokuphendula kwintlungu.
Ngokwezinye izifundo, i-CBD idibana ne-neurotransmitters kwi-ECS, ebizwa ngokuba yi-endocannabinoids, inceda ukunciphisa uvakalelo lwentlungu. Iimveliso zeoyile ze-CBD zibangela ukuphumla kunye noxinzelelo, zikuncede ulale ngcono kwaye ukhulule uxinzelelo, ngaphandle kokwenza ukuba uzele ukozela okanye ube nesiyezi.
Iimveliso zeoyile ze-CBD zikwanceda kwimpilo yolusu. Ukusuka ekunciphiseni iingxaki zolusu ekuncedeni ngemiba yokuguga.
Zonke iimveliso zethu zivela kwi-CBD etyebileyo, i-organic hemp yoshishino ekhulile e-USA, kwaye ilungiswa kumzi-mveliso weqabane lethu eLas Vegas, eNevada.
Zeziphi iimveliso zeoyile ze-CBD esinokukunika zona?
Sinikezela uluhlu olubanzi lwemveliso ephezulu ye-CBD ebonakalayo kunye nebanzi elibanzi. Phakathi kwabo unokufumana:
I-CBD Tinctures kunye neeoyile
Izixhobo ze-CBD: - Iitshomi - Iipilisi
Imixholo ye-CBD: -i-CBD Analgesic- iiPatches ze-CBD
I-CBD yolusu: - Izithambiso zobuso be-CBD - Ii-Serum zobuso be-CBD - Ukulwa nokuguga kwe-CBD
Iintyatyambo zeCDD zokuTshaya
I-CBD yeoyile yokuVumba.
Izixhobo zokutya ze-CBD zezilwanyana zasekhaya.
Delta 8 THC Iimveliso
Kutheni le nto sikhethe kakhulu?
Iimveliso ezisemgangathweni ophezulu ezenziwe eMelika: Zonke iimveliso zethu zivela kwi-CBD etyebileyo, i-organic hemp ekhuliswe e-USA, kwaye ilungiswa kumzi-mveliso weqabane lethu eLas Vegas, eNevada.
IiPhytochemicals zePremiyamu: Ngaphandle kokuqulatha i-CBD evavanyiweyo elebhu, zonke iimveliso zethu ezigcweleyo ziqukethe i-phytocannabinoids yendalo, kubandakanya i-terpenes, i-flavonoids, kunye neendlela ezincinci ze-THC.
Ukuphuculwa kwe-Bioavailability: Zonke iimveliso zethu zokusebenzisa ngomlomo, njengeoyile ye-CBD kunye nokuthanjiswa, zikunika inqanaba eliphezulu lokufumaneka, xa kuthelekiswa nezinye iimveliso ze-CBD.
Oko kuthetha ukuba kuya kusebenza ngakumbi.
Ukuziqhelanisa nokukhupha okukhuselekileyo: Yethu Ioyile ye-CBD kwi-intanethi ayinazinyibilikisi kwaye iyakhutshwa kusetyenziswa i-atmospheric carbon dioxide (CO2) kwinkqubo evaliweyo.
Umxholo we-CBD ovavanywe eLabhoratri: Unokujonga kwiingxelo zethu ezivela kwiilebhu zomntu wesithathu ukuqinisekisa i-CBD kunye nezinye iziqulatho zeekhemikhali kwiimveliso zethu.
Inkonzo yabaThengi abagqwesileyo: Iqela lethu leengcali liya kukunceda ekukhetheni imveliso elungileyo oyifunayo. Kithina, ukoneliseka kwabathengi yeyona nto ibalulekileyo.
Zonke iiMveliso ze-Red Emperor ze-CBD ziyavavanywa ngumntu wesithathu kwaye zinokuqinisekiswa ngomgangatho nococeko ngokuskena ikhowudi yebhokisi engezantsi nge-smartphone yakho.
Iqabane lethu lokuThengisa kwi-Intanethi Isenselogic.com Iya kuqinisekisa ukuba iimveliso zakho zidweliswe kwiinjini zokukhangela.
Thenga ioyile ye-CBD kwi-Intanethi
Ivenkile ekwi-Intanethi yeRed Emperor ye-CBD isekwe kumawakawaka eminyaka yonyango olunempumelelo ngesityalo se-hemp esiqala ukurekhodwa kwimbali sisetyenziswa e-China ngu-Emperor Shing Nung ekwabizwa ngokuba ngu-Emperor Olubomvu. Intengiso yeCannabis nguIsenselogic.com inombolo yokuqala ye-SEO eqinileyo yokuzihlaziya yentsangu, intsangu yezonyango kunye neewebhusayithi ze-CBD.
Iphepha likaFacebook livula kwiwindow entshaIphepha le-Twitter livula kwiwindow entshaIphepha le-YouTube livula kwiwindow entshaIkhasi le-Linkedin livula kwiwindow entshaIphepha le-Instagram livula kwiwindow entsha
Ilungelo lokushicilela © 2020 RedEmperorCBD.com | Ixhaswa ngu IsenseLogic.com